कप्तान रेनुकाको सफल शल्यक्रिया
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी कप्तान रेनुका नगरकोटेको सफल शल्यक्रिया भएको छ । एसियन कपको तयारीमा रहेकी रेनुका प्रशिक्षणको क्रममा सोमबार घाइते भएकी थिइन् । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्...
nepalpress.com . १३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा अवस्थित रारा ताल क्षेत्रमा बिजुली उपलब्ध भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो जिल्लाको दुई हजार ९९० मिटर उचाइमा अवस्थित रारा ताल क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍...
nepalpress.com . २६ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रधानाध्यापकबाट डेढ लाख लिएर १० लाखको जग्गा बुझाएका गणित शिक्षक रामबालक
माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान विषय अध्यापन गराउने शिक्षक पनि सुदखोरीको पासोमा पर्न सक्छ र ? सोदखोरहरुले त लेखपढ गर्न नजान्ने निमुखा जनतालाई ल्याप्चे लगाउन लगाएर फसाउँछन् र उनीहरूको जग्गा हडपेर सुकुम...
nepalpress.com . ४७ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
गगन थापाको सुझाव- अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ नभए प्रधानमन्त्रीले ‘एक्सन’ लिनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीको फुटेज नराख्नेमाथि तत्काल प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्...
nepalpress.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रचण्डलाई माओवादी नेताहरूको प्रश्न- कांग्रेससँगको गठबन्धन कति वर्षका लागि हो ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन र सहकार्यबारे पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलमा...
‘ढाकाको राजधानी’ घोषणामा म्याङलुङकी उपमेयरको कविता- ‘वान पिस हैन घरमै बुनी लाउँछौँ गुन्यु चोली’
म्याङ्लुङ । तेह्रथुमलाई प्रदेश १ मा ढाकाको सबैभन्दा उर्वर बजार मानिन्छ । तेह्रथुममा पनि म्याङ्लुङ बजार क्षेत्रबाट ढाकाको बजार राम्रोसँग फस्टाएको छ । यहाँको ढाकाको बजार देश देखी विदेशसम्म छ । स्थान...
nepalpress.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राप्रपा नेपालले चुनावी गठबन्धनका लागि समान विचारधाराका दलसँग वार्ता थाल्ने
काठमाडौं। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आगामी प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि समान विचारधारा भएका दल र समूहसँग वार्ता थाल्ने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकले पार्टी केन्द्...
काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सोमबार अपराह्न शीतल निवासमा उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तीन म...
पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्न प्रचण्डलाई सुझाव, सहमति नभए चुनाव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै पदाधिकारी र स्थायी कमिटी तथा पोलिटव्युरो चयन गर्न दबाब परेको छ । आइतबारदेखि शुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफलमा ...
सरकारलाई निगमको सुझाव : बाइक र कारलाई सीमित इन्धन दिऊँ, जोरबिजोर प्रणाली लागू गरौँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम तेल इन्धन विक्री गर्दा दिनप्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । अब निगमले आफ्नो घाटा थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारलाई विभिन्न १० बुँदे सुझाव दिएको छ । १० बुँदे सुझावमा बाइकलाई सीमित इन्...
संगठनमा अराजकता देखियो छानबिन गरौँ : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले संगठनमा देखिएको अराजकताको छानबिन गर्न माग गरेकी छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले संगठनमा अराजकता देखिएकाले यसको व्यवस्थ...
सुर्खेत । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर जान समाजवादी तयार रहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीको ६ घण्टा लामो सचिवालय बैठकपछि ...
धनगढीकी उपमेयरको गुनासो – मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले बाहिरै बजेट बनाए, यसरी सहकार्य हुन्न (भिडिओ)
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा बजेट ल्याएको भन्दै उपप्रमुख कन्दकला रानाले विरोध गरेकी छन् । धनगढीमा सोमबार देखि सुरु ...
कामना सेवा विकास बैंकको बिना धितो कर्जा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । खबर एक्सप्रेस र कामना सेवा विकास बैंक बिना धितो प्रोफेसनल कर्जा दिने एक सम्झौता भएको छ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र खबर एक्सप्रेस बीच प्रोफेसनल कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा आज सम्झौता भएक...
हुन्डी कारोबारमा संलग्न पौडेलमाथि करिब साढे ८ करोड बिगो माग
काठमाडौं । हुन्डी कारोबारीको आरोप लगाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले एक व्यक्तिविरुद्ध करिब साढे ८ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पर्वतको कुस्मा स्थ...
माओवादी बैठकमा मात्रिकाको माग- म अन्तर्घाती बैठकमा छु, छानबिन होस्
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मात्रिका यादवले मधेस प्रदेशमा स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात भएको र आफूमाथि समेत सो आरोप लागेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डको प...
पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुलाबजंगले भनेः म अन्यायमा परेँ
काठमाडौं । पार्टीको एक जिल्ला नेतृसँगको टिकटकले विवादमा परेका कर्णाली एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले आफू अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पत्रकारसँग न्याय माग्न ...
nepalpress.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
९ अंकले घट्यो बजार, ४ अर्बभन्दा धेरैको कारोबार
काठमाडौं । आज सेयर बजार ९.७५ अंकले घटेको छ । बजार ०.४७ प्रतिशतले घट्दा नेप्से परिसूचक २०७६.६७ अंकमा आएको छ । आज ४ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । २ सय ३४ वटा कम्प...
नाबालकले लगाउने कपडाको बटन नै सुनको पाइएपछि…
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । सोमबार बिहान ११ बजेट दुबईबाट काठमाडौं आएका सुमन दमाई अवैध सुनसहित पक्राउ परेका हुन् । चेकजाँचका क्रममा उनले ...
हराइरहेका मानबहादुरको शव फेला
हेटौँडा । पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको जंगलमा एक शव फेला परेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को मकरीस्थित भोर्लेटाँडी जंगलमा स्थानीय ६५ वर्षीय मानबहादुर घलानको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी क...
इनफ इज इनफ’ भन्दै ओलीले विगत र वर्तमान सम्झाउँदा गगनको यस्तो ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ (भिडिओ)
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेताले बोल्ने जानकारी पुगेपछि आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद् भवनमा पुगेका थिए । बैठक शुरु गर्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापको...
विनोद शाही हत्या प्रकरण : अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
कैलाली । अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का स्थानीय विनोद शाहीको घटनाका विषयमा आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय र प्रहरीबिच झडप भएको छ । घटनाका आरोपीलाई बचाउन सरकारी वकिल कार्यालयले भूमिका खेलेको भन्दै स...
ओलीको कटाक्ष- टाउकोको मोल तोक्ने र टाउकोमा बम हान्ने मिलेर लुट्दैछन्, युद्ध पीडितको बिचल्ली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टाउकोको मोल तोक्ने र अर्काको टाउकोमा बम हान्ने दुवै पक्ष मिलेर आज देश लुट्ने र युद्ध पीडितलाई झन् पिडा दिने खेलमा संलग्न रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ...
nepalpress.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अमेरिका भ्रमणबाट फर्किए प्रधान सेनापति शर्मा
काठमाडौं । दुई साताभन्दा बढीको विदेश भ्रमणपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की तथा र...
काठमाडौं । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले गोली हानी आत्महत्या गरेका छन्। ३२ वर्षीय दीपक सिंह नाम गरेका सुरक्षाकर्मीले आफैलाई इन्सासमार्फत गोली हानेको उच्च प्रहरी स्रोतले जा...
विनोद चौधरी लक्षित ओलीको टिप्पणी- ठूलो संख्यामा गाडी अर्डर गरेर करका दर परिवर्तन गरियो
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सांसद तथा खर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको लागि बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको दाबी गरेका छन् । चौधरीको नाम नलिई प्रम...
कांग्रेस नेता घिमिरेको प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न- अयोग्य अर्थमन्त्रीलाई फेर्नुपर्दैन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अयोग्यता छताछुल्ल भएको बताएका छन् । एक ट्विट लेख्दै उनले गभर्नर निलम्बन अर्थमन्त्री शर्माको अयोग्यताको एक दृष्टा...
कमल थापाको प्रस्ताव- स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएका विकृत कम गर्न जनताबाट निर्वाचित प्रणाली कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ट्विटरमा एक ट्विट सार्वजनिक गर्दै उनल...
देउवालाई ओलीले भने- अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन होस्, यो भ्रष्टाचार सामान्य होइन
काठमाडौं । संसदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छे राखेर बनाइएको बजेटमा दुई-चारजना व्यापारिक घरानाको अनुहार झल्किएको भन्दै प्रधानमन्त्...
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान ‘ड्रग एडिक्ट’ भएको आरोप
काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान ‘ड्रग एडिक्ट’ रहेको आरोप लागेको छ । पाकिस्तानको पंजाब प्रान्तका गृहमन्त्री अता तराडले इमरान खान पहिला देखिनै ‘ड्रग एडिक्ट’ रहेको आरोप लगाएका हुन्...
सिद्धबाबा दर्शनमा आएका एक भारतीयको डुबेर मृत्यु, अर्का बेपत्ता
रुपन्देही । रुपन्देही-पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा दर्शन गर्न भारतबाट आएका दुई युवकको तिनाउ नदीले बगाएकोमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् । सिद्धबाबा मन्दिरको दर्शन गरेर झोल...
नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने जेसीबीसहितका सवारी नियन्त्रणमा
काठमाडौं। मोरङ प्रहरीले नदीमा अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै ८ वटा सवारी साधनसहित त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका साधनमा ४ वटा टिपर, ३ वटा ट्याक्टर र एउटा जेसीबी रहेको छ। केराबार...
संसदमा ओलीले भने- कांग्रेस र माओवादीले अघि बढाएको एसपीपी मैले स्टप गरेको हो
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसपीपीका सन्दर्भमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै...
जिसस अब आर्सनलमा
लन्डन। ब्राजिलियन मिडफिल्डर गाब्रियल जिसस इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीबाट आर्सनलमा स्थानान्तरण भएका छन्। २५ वर्षीय जिसस म्यान सिटीमा साढे ५ वर्षपछि बसेपछि अर्को इङ्लिस प्रिमियर लिग क्...
आरोही लालबहादुरले लेनिन पिकमा एसनिकट युवा संघकाे झण्डा फहराउने
काठमाडौ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश शाहीले हिमाल आरोही लालबहादुर जिरेललाई संघको तारा अंकित झण्डा हस्तान्तरण गरेका छन् । सोमबार संघको केन्द्रीय कार्यालय बुद्ध नगरमा...
bbc.com . १ घण्टा अघि